Izindaba - Amakhono okukhethwa kwesikrini esiqondile sokudlidliza
1. ngokusho kokukhethwa kwesayithi
Ubude nobubanzi besiza kufanele bucatshangelwe uhlobo oluqondile lokuhlolwa kokudlidliza; kwesinye isikhathi ububanzi bokukhishwa kwesikrini sokudlidliza komugqa kunqunyelwe, futhi ukuphakama kwesiza nakho kunqunyelwe. Ngalesi sikhathi, ama-motors amabili adlidlizelayo angabekwa phezulu noma ezinhlangothini zombili zesikrini esiqondile sokudlidliza ngokuya ngezimo zesayithi.
2. Ukunemba kokuhlolwa kanye nokuhlolwa kwesivuno sezinto zokwakha kufanele kubhekwe
1) Kukhudlwana ubude bendawo yesikrini yesikrini sokudlidliza komugqa, ukuphakama kokunemba kokuhlola, ubukhulu bubanzi, ukuphakama kwesivuno sokuhlola. Ngakho-ke, ububanzi nobude obufanele kufanele bukhethwe ngokuya ngesimo esithile.
2) Lapho umthamo wokukhiqiza uphansi, singakhetha uhlobo oluncane lwesikrini sokudlidliza, futhi lapho umthamo wokukhiqiza uphezulu, kufanele sikhethe isikrini esikhulu sokudlidliza esikhulukazi.
Ukuthambekela engeli kwesikrini ebusweni komugqa isixwayisi screen,
Uma i-angle yokuthambekela kwendawo yesikrini incane kakhulu, okubalulekile kuzovinjelwa. Uma i-angle yokuthambekela inkulu kakhulu, ukunemba kokuhlola kuzoncishiswa. Ngakho-ke, i-angle yokuthambekela kwendawo yesikrini kufanele ibe maphakathi.
4. imvelo yezinto ezibonakalayo
1) Lapho sikhetha isixwayisi esidlidlizelayo, kufanele sikhethe izinto ezahlukahlukene ngokuya ngezinto ezahlukahlukene ezibonakalayo. Ngokwesibonelo, ezonakalisayo ukukhetha insimbi engagqwali isixwayisi screen.
2) Usayizi anezikhala kukhethwe ngokuya ngosayizi wezinhlayiya ezibonakalayo.